Sabab la xiriirta midabka maqaarkooda ayaa looga reebay diyaarad! | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / Sabab la xiriirta midabka maqaarkooda ayaa looga reebay diyaarad!
Himilo FM – Jordan Felix oo ah haweenay u dhalatay Mareykanka ayaa raacday diyaarad hase ahaatee waxay la kulantay xaalad dullinimo ah oo noqotay tii ugu adkeyd nolosheeda.
Wargeyska Daily Mail ee dalka Ingiriiska ayaa qoray in Jordan raacday diyaarad ay leedahay shirkada American Airlines oo ka tagaysay Taxes iyadoo ku sii jeeda magaalada Dallas oo isla gobalkaasi katirsan.
Previous: 3-da Maarso – Maalinta Caalamiga ee Duurjoogta
Next: Garsoore amray in la xero 14 macallin oo ay isku qabteen garoon salax ah!